CASIIRKA APPLE EE GURIGA: QASHIN-TALLAABO TALLAABO TALLAABO AH OO LAGU KARSADO - TUFAAX
Ugu Weyn Ee Tufaax
Sida loo kariyo juice tufaax delicious jiilaalka isticmaalaya juicer
Ka mid ah tirada badan ee cabitaanka miro, cabitaanka tufaaxa waa midka ugu jaban oo caan ah. Sida laga soo xigtay qaabka fiitamiin-macdanta, saynisyahannadu waxay ugu yeeraan "biyaha nool", maxaa yeelay ma aha oo kaliya dib u soo kabashada jidhkeena, laakiin sidoo kale waxa ay ka hortageysaa cuduro kala duwan, gaar ahaan haddii cabitaanku si tartiib ah u urursan yahay.
Guri ama baakaysan: faa'iido iyo faa'iido daro
Dukaamada iyo dukaamada yaryar waxaad ka arki kartaa cabitaanada tufaaxa ee soo saarayaasha kala duwan. Haddii aad eegto qeybtooda, waxaad soo gebogebayn kartaa in qaar badan oo ka mid ahi ay ka fog yihiin dabiiciga.
Cabbitaan kasta oo la cabbo, waxaa daruuri ah in la ilaaliyo sonkorta iyo sonkorta lagu daro tiro kala duwan, waxay kordhisaa waxyaabaha kalooriga ah ee cabitaanka, sidaas awgeedna waxay ku darsataa boogaha dheeraadka ah, iyo maaddada qadar badan oo ka mid ah ilaaliyeyaashu waxay keeni karaan horumarinta cuduro kala duwan. Waa suurtagal in la isticmaalo casiirka noocyada yar yar iyada oo aan wax faa'iido gaar ah u laheyn jirka. Xalka ugu fiican ee saxda ah waa cabitaanka laga sameeyey alaabta ceeriin ee guriga tayo sare leh. Si aad u hesho waxaad u baahan tahay inaad waqti iyo dadaalba qaadato, laakiin badeecadan dabiiciga ahi waxay u oggolaaneysaa:
Sababtoo ah xaddi badan oo antioxidants ah si loo ilaaliyo shaqada caadiga ah ee wadnaha iyo xididdada dhiigga;
xawaarida hababka dheef-shiid kiimikaadka, iyo, natiijada, waxay gacan ka geysan doontaa dagaalka lagula kaco miisaanka dheeraadka ah;
dadka waayeelka ah si ay u ilaaliyaan caddaynta maskaxda iyo xasuusta oo ay yareeyaan khatarta ah inay ku dhacdo cudurka Alzheimers;
Ka fogow dhibaatooyinka maqaarka iyo timaha, maadaama ay leedahay saameynta anti-bararka iyo saameynta antiseptic;
haweenka cunugga qaadaya waxay buuxin doonaan jirka oo leh fitamiino iyo macdan (oo ka kooban 30 jibaaro iyo macro macro) oo yareynaya sunta sunta, taas oo ka dhacda haweenka uurka leh;
Ka fogow dhibaatooyinka ku jira caloosha. Pectin, oo ah qayb ka mid ah tufaaxa, waxay sameeyaan tiro jelly ah, taas oo nuugaysa dhammaan walxaha sunta waxayna hagaajinaysaa shaqeynta mindhicirka;
ka qaado neefta astaamaha bukaanka qaba neefta;
nadiifi beerka iyo xiidmaha xiidmaha ee sunta ah ee ku urursan iyaga.
Baro wax badan oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee cabitaanka casiir, iyo sidoo kale siyaabaha loo sameyn karo casiirka iyada oo aan wax saxaafadeed aheyn.
kiimikooyinka kiimikada waxay gacan ka geysan karaan horumarinta xanuunka caloosha, caloosha caloosha;
Waxyaabaha sonkorta badan leh qaadashada daawada caadiga ah waxay keeni kartaa horumarinta sonkorowga mellitus;
Walxaha ilaaliyeyaasha iyo dejiyeyaasha waxay u dhaqmaan mabda'a antibiyootiko - waxay burburiyaan sheyga waxyeelada leh iyo ha u haysan kuwa waxtar leh, oo ku xad gudbaya microflora mindhicirka.
Ma taqaanaa? Maalmihii hore, dadwaynaha Slavic ayaa aroosadda gabadha ugu dhiibay arooska ka hor intaanay arooska ka tegin, oo ay ku khasabtey inay meesha ka baxdo meeshii allabariga si ay caruur u dhalato.
Sida loo doorto tufaaxa cuntada
Si aad u hesho cabitaan dhadhan fiican leh, waxaad u baahan tahay inaad doorato miraha fiican oo casiir leh iyadoon wax calaamad ah u dhicin iyo waxyeelo. Taabashada ugu wanaagsan ee la soo ururiyey dhammaadkii bishii Agoosto iyo horraantii Sebtembar. Waa waqtigan in miraha ay noqdaan kuwa ugu casiir badan. Noocyada soo socda waa ku habboon yihiin: Antonovka, buuxinta cad, "Anuksis" iyo kuwo kale. Tufaaxu waa inuu ahaadaa mid ballaaran oo culus, ka baxsani ma siin doono dareere badan.
Waxaad u kaydin kartaa goosashada tufaax siyaabo badan: cusub, la qaboojiyey, la qalajiyey, qooyay; kariyo macaanka iyo macaanka, waxsoosaarka, tufaaxa saafiga ah cider, cider, moonshine.
Talo-tallaabo tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay cabitaanka tufaaxa cabitaanka guriga ee jiilaalka
Helista casiirka guriga ma aha geedi socod kakan oo waqti badan ah. Waqtiga la qaatay (6 kg oo tufaax ah ayaa qaadan doona qiyaastii 1.2 saacadood) ayaa ku abaal marin doona fiitamiin aad u fiican.
Waxa aad u baahan tahay: qalabka jikada iyo qalabka
Si aad u dhamaystirto nidaamka waxaad u baahan doontaa:
digsiga cabitaanka soo baxa;
dhalooyinka dhalooyinka ama dhalooyinka leh furka xadhkaha;
xargo si ay u daadiyaan alaabta soo baxda.
Alaabta loo baahan yahay
Si aad u diyaariso 1.5 litir oo casiir ah waxaad u baahan tahay 5 kg oo tufaax ah iyo sonkor (dhadhan). Miraha waa in ay ahaato mid adag oo macaan, macaan oo dhadhan.
Ku dhaq tufaaxa si fiican biyo.
Iska yaree miro. Haddii laga soo qaado dhulka, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto dixirigga, asalka iyo waxyeellada oo dhan. Tufaaxyada si toos ah looga soo gooyay geedka waa in la googooyaa asaas ahaan.
Ku wareeji miro adoo isticmaalaya juicer. Waxaad ku dari kartaa waxoogaa citric acid ah oo casiir ah ma badalo midabka, sababtoo ah hoosta hawsha qiiqa hawada ee birta waxay ku dhacdaa tufaaxa.
Cabitaanka soo-baxa waxaa lagu shubayaa galbeedka oo ha u istaagaan in muddo ah. Marka aad isku xoqdo xumbo qaro weyn ayaa la sameeyaa, taas oo ah in si taxadar leh looga saaro dusha oo leh qaaddo.
Dheriga ku rid dabka, oo walaaqaya alaabtiisa, kuleylka heerkul ah +80 C Xakamee heerkulka leh heerkulbeegga jikada. Ka qaad weelka kuleylka oo u ogolow inay si buuxda u qaboojiso.
Ka dibna dheriga dib u geli karinta oo kuleyliya mar labaad +97 ° S.
Casiirka ku shub dhalooyinka barafaysan ee loo diyaariyay. Waa lagama-maarmaan in si tartiib ah loo buuxiyo, qaybo, si ay weelku u kululaan karaan si siman oo aan loo dumin.
Bangiyada daboolka nadiifka ah, dib u jooji oo hubi in aysan jirin dheecaan.
Si fiican u duub oo u oggolow inaad si buuxda u qaboojiso.
Waa muhiim! Waxaad ka dhigi kartaa macmacaanka xaydha la soo ururiyey adoo ku daraya sonkorta iyo karkarinta si ay u sii dheeraato.
Shuruudaha iyo xaaladaha kaydinta cabitaanka tufaaxa
Inta lagu jiro kaydinta muddada dheer, nafaqooyin badan ayaa si degdeg ah loo burburiyaa, sidaa daraadeed ikhtiyaarka ugu fiican waa casiir cusub, oo la cunay 15 daqiiqo ka dib diyaarinta. Laakiin waxaa jira marar badan oo cabitaan badan laga helay miro-geedka tufaaxa hodanka ah, isla markiiba su'aashu waxa ay ka timaadaa sida ugu fiican ee loo keydiyo si loo helo faa'iidada ugu badan ee alaabta mustaqbalka. Waxaa jira dhowr hab oo lagu keydiyo:
Casiirka cusub ee la jarjaray waa in aan laga tagin qaboojiyaha muddo ka badan 4 saacadood. Ku kaydi weel dabool ama caagag leh dabool adag oo xiran si aanay u jirin helitaanka hawada. Laga soo bilaabo xiriirka oksijiin, burburinta qaybo ka mid ah faytamiinada iyo macdanta macdanta ee tufaaxa ayaa dhacda oo cabitaankuna wuxuu noqdaa buni. Isla mar ahaantaana, marka la soo koobo, casiirku wuxuu noqdaa mid jilicsan, taas oo u wanaagsan dadka qaba dhibaatooyinka leh dhuunta mindhicirka;
Ku shub badeecad cusub oo la shubay caaga caagagga balaastigga ah una dir qafiska qaboojiyaha. Noocida noocaan ah uma baahna karkarinta sheyga iyo, natiijada, fiitamiinada iyo macdanta ayaa si buuxda loo ilaaliyaa oo dhadhanka looma beddelo. Dib-u-dhalinta waxay ku dhacdaa heerkulka qolka, iyo in la dedejiyo geedi socodka, weelka waxaa la gelin karaa weel biyo leh diiran;
cabitaanka qasacadaysan ee kaydinta dheer. Habkani waxaa lagu kaydiyaa alaab la kariyey oo lagu daray maadooyinka (sonkorta) ee weelka daboolan. Marka la kululeeyo, xaddi badan oo fiitamiin iyo macaadin ayaa la burburiyaa, laakiin xilliga qaboobaha, iyada oo ayan jirin wax litir ah oo casiir ah maalin kasta waxay noqon kartaa caawin wanaagsan oo lagu ilaaliyo difaacida xaaladaha caadiga ah.
Waa muhiim! Si hoos loogu dhigo oksida iyo burburinta birta ee cabitaanka, waxaa lagama maarmaan ah in ay acidify leh qadar yar oo liin ah.
Xeelado yaryar: sida loo sameeyo casiir ka badan oo hufan
Cabitaanka soo-baxa ayaa la caddeeyn karaa iyada oo la sameynayo waxyaabaha soo socda:
cabitaanka liinta waxaad u baahan tahay inaad difaacdo wax yar, ka dibna ku cadaadi adigoo u maraya dhawr faashad oo faashad ah, sidoo kale tuujin dhererka filterka;
ku shub cabitaanka weel yar oo ku rid barkadda biyaha. Si aad uhesho 4 daqiiqo ka dib biyo karkariyo kana saar xayawaanka la sameeyay ee qaadada qaado;
si dhakhso ah ugu qabow adoo galinaya digsi biyo qabow 3 saacadood. Inta lagu jiro wakhtigan, casiirka ayaa loo kala qaybin doonaa dareeraha cad iyo masiibo ku dhajin doonta hoosta weelka;
si tartiib ah u daadi daaha lakabka sare. Wixii habraaca si fiican u caddayn karaa dib loo soo celin karo.
Ku saabsan faa'idooyinka alaabta
Iyada oo ay ka kooban tahay fitamiin iyo macdan macdanta leh, cabitaanku wuxuu leeyahay kaloori wax yar oo isla markaana faa'iido u leh qof walba.
Waxaa xiiso leh in laga akhriyo faa'iidooyinka tufaaxa: qalajiyey, qooyay, dubay.
Faa'iidooyinka badeecada loogu talagalay qeyb weyn oo ka mid ah aadanaha:
Caadi dhiigga, xoojiyaa lafaha wuxuuna kordhiyaa dulqaadka jidhka ee jirdhiska;
wuxuu yaraynayaa halista asmada, dhibaatooyinka kansarka iyo cudurka Alzheimers;
wuxuu xoojiyaa nidaamka wadnaha;
wuxuu soo celiyaa hormoonada lab iyo dheddig.
Ma taqaanaa? Norman Walker, oo ku noolaa 99 sano, had iyo jeer wuxuu haystay 1 koob oo cabitaan ah tufaaxa maalin kasta, taas oo u ogolaatay inuu ilaaliyo qalbi caafimaad leh, xasuus wanaagsan iyo maskax furniimo illaa dhammaadka maalmihiisa.
Fitamiino iyo macdano kala duwan ayaa kaa caawin doona:
xoojinta nidaamka difaaca jirka;
cusbooneysiinta dhiig iyo kordhinta hemoglobin;
ka fogow xaalad niyadjab iyo niyad jab;
inay ilaaliso quruxda dumarka - si loo xoojiyo ilkaha, ciddiyaha, timaha.
Sanad ka dib dhalaanka ayaa lagula talinayaa inay cabaan 200 ml oo cabitaanno ah maalin kasta. Tani waxay ogolaan doontaa:
Ka fogow hypovitaminosis iyo dhiig yari;
horumarinta kartida maskaxeed;
fududahay inaad qaadato hargab.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan miirka caafimaadka leh
Marka laga reebo tufaax, karootada, bocorka, canab iyo casiir kale ayaa faa'iido u leh jirka.
Sidoo kale akhri waxyaabaha ku saabsan faa'iidooyinka rummaanka, buckthorn badda, viburnum, dabocase, casiirka bjørk.
Casiirka laga helo dabacasaha, tones oo qumman oo xoog leh jirka, waxtarka wanaagsan ee aragtida. Isticmaalka waxaa lagu haynayaa kaliya 30 daqiiqo ka dib wareegga, sidaas darteed waa in lagu diyaargaroobaa qadarkaas oo la isticmaali karo waqti.
Casiirka Pumpkin wuxuu ka kooban yahay qadar badan oo fibre ah, shaqada ugu muhiimsan taas oo ah in la nadiifiyo marinka mindhicirka. Sidoo kale, qaadashada maalin kasta ee 0.5 koob oo casiir ah laba jeer maalintii ayaa kaa caawineysa ilaalinta sonkorta dhiigga heerkeedu ku habboon yahay, yareeyo "xun" kolestaroolka, kordhinta xinjirta dhiigga, iyo xawaarida geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka jirka iyo hagaajinta difaaca.
Casiirka ka soo baxa canabku waa mid aad u faa'iido leh oo xitaa jihada daaweynta oo dhan loo yaqaan ampelotherapy. Casiirada canabkuna waxay daaweysaa hababka bararka ee kelyaha, dhiig yari, qaaxada marxaladda hore, iyo sidoo kale xanuunada dareenka iyo hababka bararsan ee unugyada lafaha.
Ogow waxa faa'iido leh iyo sida loo diyaariyo casiir sabiib ah xilliga jiilaalka.
Macmacaanka kariska casiirka Apple
Sannadkii hore waxaan haystay tufaax badan, 300 litir oo casiir ah ayaa la xidhay oo aan la jarin koofiyad hal keli ah. Oo waxaan kaliya xiray juuska, tuujin juuska on juicer, sifeeyeen iyada oo cheesecloth (sidaas darteed jirin jirin soo saaro ee xabadaha), ku rid digsi on dabka, kulul ilaa 80 darajo iyo xireen barmiilka caadiga ah maydheen.
Waxaan ka sameeyaa casiir tufaax ah dheri casiir ah - waxaa igu habboon aniga. Daqiiqo barkin / baaldi tufaax, ku shubtay qayb shaaha-kariye ah oo la kariyey-u tegey si ay u sameeyaan waxyaabo kale. Waxaa lagama maarmaan ah in marxalado loo maro tufaaxa hoostiisa, laakiin casiirkii diyaarka ahaa ee kusaddii waa gogol daadin-quruxsan! Oo waxaa lagama maarmaan ah in la istaago "xiran" muddo dheer oo u dhow soo saaraha casiirka si loo tuujiyo 3-6 litir oo casiir ah. Waxa kale oo aan heystaa wax soo saaraha casiirka ah (aad u xoog badan), laakiin waxaan u isticmaalaa kaliya diyaarinta casiirka "si isla markiiba cabo."
Marka aad dooranaysid casiirka, haddii ay suurtagal tahay, waxaa fiican inaad bixiso doorasho alaab guri ah, isticmaalka maalinlaha ah kaas oo ka faa'iideysan doona jirkaaga, gaar ahaan xilliga qaboobaha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Tufaax 2020